Funda amakhono wedijithali ku-WhatsApp, ngesiZulu, mahhala! – The Ulwazi Programme
INingizimu Afrika ibhekene nokwentuleka kwamakhono okuwumthelela wokwanda kwezinto zobucwepheshe. Izakhamuzi zidinga ukufunda ngesisekelo samakhono obucwepheshe, lokhu kufaka nolwazi lokusebenzisa ikhompyutha, ukuthi usesha kanjani, kanye nokuhlola, ulwazi ku-inthanethi. Lolu lwazi lungabachushisa ekwazini izinto ezahlukene njengolwazi lokuzivulela ibhizinisi elincane noma ukubona izindaba ezingelona iqiniso nabenza ubukhonyovu ku-inthanethi.
Izinkundla zokufunda ku-inthanethi azibasizi abantu abaningi eNingizimu Afrika. Izifundo zisebenzisa amadatha amaningi kanti futhi zethulwa ngezilimi ezingajwayelekile kubafundi. Abadali be-Diji bathi:
Senze ucwaningo nabantu abangamaZulu abangaphezu kuka-8,000 esifundakwezi KwaZulu Natali naseGoli. U-94.5% wabo ufuna ukufunda komakhalekhukwini ngolimi abaluncela ebeleni. Sakhe iwebhusayithi yokufunda ngomakhalekhukhwini futhi manje kune-WhatsApp chatbot. Nge-Diji(www.diji.africa) nange-WhatsApp chatbot sihlanganise amandla e-WhatsApp kanye nokufunda ngolimi lwebele ukuletha izifundo ezimfishane ngesisekelo sobuchwepheshe bamakhono kubantu abakhuluma isiZulu.
Cofa lapha ukuqala ukufunda ngobuchwepheshe bamakhono ku-WhatsApp ngesiZulu mahhala.